U-KATY PERRY AMAGAMA ABIZWA NGOKUBA NGUSANA WAKHE NGE 'PUN', USILIPHU WAKHE KUNYE NEWOWS - UBONISO
Mhlawumbi ayothusi mntu ukuba uKaty Perry angagqibela ngokuba liqhula lomama. Hlaziya ixesha
Mhlawumbi ayothusi mntu ukuba uKaty Perry angagqibela ngokuba liqhula lomama. Phinda ujonge ixesha xa wayenxiba yena kunye nenja yakhe njengeendlovu kwiDumbo ukulungiselela usana oluhle, ekhaya. Okanye gxininisa kwindlela egwenxa yena kunye neqabane lakhe lobomi, u-Orlando Bloom, batyhila isini somntwana wabo.
Umama ozayo, uKaty Perry Umama wokufota sele! Inkwenkwezi ye-pop eneminyaka engama-35 yenye yezona zibalaseleyo, kwaye akukho mathandabuzo ngayo. Ngapha koko, ubomi bakhe bobuchwephesha busoloko buyinkwenkwezi ekhanyayo ngenxa yokusebenza kwakhe nzima, kodwa kwiinyanga nje ezimbalwa ukubuyela, umbono ngobomi bakhe buqu wasivuyisa kakhulu.
Isibini esineenkwenkwezi uKaty Perry kunye no-Orlando Blossom babhengeze umhlaba malunga neendaba zabo ezilungileyo ngevidiyo yomculo yangaphambili. Ukusukela ngoko, konke oko bekukho malunga 'nokuthandeka' kokudubula komntwana wakhe, ukukhulelwa kwakhe kukhanya, kunye notata kaBlossom.
Igama lesiqhulo elithathe i-Intanethi ngesaqhwithi
Kudliwanondlebe oludlulileyo kunye neHits Radio, umama oqaqambileyo ekwabelana malunga nokukhulelwa kwakhe kunye nooye.
Wayebonakala enochulumanco olukhulu kwaye ekulungele ukwamkela usana lwakhe ‘kwakamsinya.’ Eveza umbono obalulekileyo, kwaye uxelela ukuba esi sibini siyakwamkela umntwana kunye nealbham yakhe entsha, eza kukhutshwa nge-14 ka-Agasti.
Ude wachaza nesiteketiso asibekele usana lwakhe ngexesha lokuthetha, olusana olusebenzayo. Kuxelwe, ugqirha kaPerry wamcebisa ukuba asebenze, kwaye ke uPerry wabhenela ekungqungqeni, oku kuye kwabangela ukuba kususwe izinto ezininzi kusana lwakhe. Kwaye ukukhaba kuye kwamenza wahleka, kwaye uKaty uthathe isigqibo sokuthiya igama lokuba yingelosi ezelwe 'njengoKicky.'
Bobabini abazali bonwabile kwaye bonwabile ukuba ngabazali okokuqala. Nangona u-Lord Of The Rings weqonga sele engutata kumntwana wakhe oneminyaka elithoba ubudala u-Flynn Christopher Bloom kunye no-Miranda Kerr, u-Katy Perry uyavuya ngamava akhe, anceda i-duo kakhulu ngexesha lokukhulelwa.
Utshilo ngelithi uyamqhula ukuba umfumana engutata 'o-sexy'. I-duo iyabandakanyeka kwaye bonke bonwabile ukwamkela usana lwabo olusanda kuzalwa.
Ngaphambili kwezobuchwephesha, ukhuphe into yokubonisa ukukhululwa kwakhe okuzayo, kwaye ke, uPerry uyakhazimla buqu kunye nobungcali! Uyigcina phezulu.
re: ixesha le-3 isiqendu 1
Iziqendu zosapho lwakwajesu
Amaphupha amabi ekhitshini amaxesha 4 isiqendu 2
iziqendu ezilungileyo zangokuhlwa
Ixesha le-ragnarok 3 lokukhutshwa komhla